” ကျေးဇူးပါ ဂဇက်ကြီးရေ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” ကျေးဇူးပါ ဂဇက်ကြီးရေ “
” ကျေးဇူးပါ ဂဇက်ကြီးရေ “
Posted by ခင်ခ on Jul 16, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 22 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးပိတ်ရက် တနင်္ဂနွေနေ့က အပျော်တန်းဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာထုံသူ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရန်ကုန် ကနေ မန်းလာလည်မယ်ဆိုသောကြောင့် မနက်အဝေးပြေးဂိတ်မှာ သွားကြိုခဲ့ရတယ်လေ။
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် လူချင်းမတွေ့ဖြစ်တာ ဆယ်စုနှစ်လောက်ဆိုတော့ သူစီးလာတဲ့အဝေးပြေးကားပေါ် ကနေဆင်းလာလို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စုံလိုက်တာနဲ့ ပြောစရာစကားတွေ တစ်ပုံတပင်စကားတွေ ထွက်လာ လိုက်ပြီး မနက်စာကို မန်းမြို့တော်ပေါက်စီဆိုင်မှာ ၀င်စားရင်းရှေ့ဟောင်းနှောင်းဖြစ်ပြောကြကာ အခုလာတာ ဘာကိစ္စလဲ ဘယ်သွားလည်ချင်တာလဲဆိုတော့ စစ်ကိုင်း၊ မင်းကွန်းနဲ့ ဦးပိန်ဘက်ကိုမို့ သိလိုက်ပါပြီ ကင်မရာ တကားကားနဲ့ ထင်ရာရိုက်တော့မယ်ပေါ့လေ။
ဒါနဲ့ဘဲ မန်းရောက်ရင်တော့ ဘုရားကြီးအရင်ဦးတိုက်လိုက်ကွာဆိုပြီး ဘုရားကြီးလိုက်ပို့ အဲဒီကအထွက် စစ်ကိုင်းဘက်ခြေဦးလှည့်ကြပြီး စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးက ဆွမ်းဦးပုံညရှင်စေတီကို တက်လှမ်းကာရောက်ခဲ့ ကြတယ်ပေါ့။ ဆွမ်းဦးပုံညရှင်ဘုရားကို သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဆွမ်းတော်ကပ် ဘုရားဝတ်ပြုပြီး သူက အနီး အနား အလှတရားရှုခင်းတွေကို သူကင်မရာကြီးထုတ်ပြီး ထိုင်ကာတစ်မျိုး ထလျှက်တစ်သွယ် ဓာတ်ပုံ ရိုက်နေ လို့ သူ့စောင့်ရင်း ဘုရားရင်ပြင်ကိုတစ်ပတ်ပတ်လိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး လမ်းလေးလျှောက်လာလိုက်တာ ရင်ပြင် တော်ရဲ့ အနောက်တောင်အရပ်က ပန်းချီကားတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ ရှုခင်းပန်းချီတစ်ခုကို ရေးဆွဲနေတာ တွေ့ သမို့ မလှမ်းမကမ်းကနေ ခင်ခ ရပ်ကြည့်နေမိလိုက်တယ်။
တော်တော်လေးကြာသွားတော့ ထိုပန်းချီဆရာ သူဆွဲတဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ်ပြီးသွားပြီမို့ သူ့လက်ရာကို ဟိုဘက် ဒီဘက်စောင်းလိုက် အတည့်ထားလိုက်ကြည့်ပြီးသကာလှ ပန်းချီနောက်ခံကဒ်ထူဘောင်ပြားပေါ်မှာ ခုနရေးဆွဲ ခဲ့တဲ့ပန်းချီကားကို သေချာကျနစွာနေရာချကပ်လိုက်ပြီး ပန်းချီကားတွေပြသတဲ့ စင်လေးရဲ့တစ်နေရာမှာ တင် လိုက်ပြီး သူ့ပန်းချီကားကို ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ပြန်လာကြည့်တော့ ခင်ခ နားရောက်လာခဲ့တယ်လေ ဒါနဲ့ဘဲ
“ဗျို့ ပန်းချီဆရာနောင်ကြီးလက်ရာက ဓာတ်ပုံအတိုင်းဘဲဗျာကောင်းလိုက်တာ အခုနောင်ကြီးဆွဲတဲ့ ပန်းချီ ကားက အော်ဒါပြုထားတာလား အသေအချာ အနီးအဝေးကြည့် ကဒ်ထူဘောင်နဲ့ကပ်ဆိုတော့”
“အခုဆွဲလိုက်တဲ့ ပန်းချီကားလား အော်ဒါမှာထားတာမရှိသေးပါဘူးဗျာ”
“ဟင် ဒါဆို ပန်းချီဆေးဖိုးလည်း အကုန်ခံ ဘောင်ကဒ်ထုဖိုးလည်းစိုက်ထားနဲ့ ဖြစ်မနေဘူးလားဗျ”
“အဲလိုတွက်ရင်တော့ ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ ဒါပေမယ့် ဒီလိုရှိတယ်ဗျ ကျွန်တော်က ပန်းချီအနုပညာကို ၀ါသနာထုံတဲ့ သူဆိုတော့ စိတ်ထဲခံစားမှုဖြစ်လာပြီး ပန်းချီဆွဲချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင် အခုလိုဘဲပန်းချီကားတွေကို ဆွဲချနေ မိတာဘဲ အဲလိုပန်းချီဆွဲနေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာ ကျွန်တော်စိတ်က အဲဒီရေးဆွဲတဲ့ပန်းချီကားပေါ်မှာဘဲ နစ်ဝင်နေပြီး ဆွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့်အတွေး ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဆွဲခဲ့တဲ့ပန်းချီမို့ ကိုယ်တန်းဖိုး ထားမိတဲ့ ပန်းချီကားပေါ်မှာမြတ်နိုးမိတဲ့စိတ်ကြောင့် ကိုယ့်ရေးဆွဲတဲ့ပန်းချီကားကို ကိုယ်တိုင်မှ တန်ဖိုးမထား တတ်ဘူး ပြန်မခံစားတတ်ဘူး ဆိုရင် ကိုယ်မဟုတ်တဲ့အခြားသူက တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ ခံစားတတ်ဖို့ဆိုတာ ပိုဝေးသွားမှာပေါ့ဗျာ ပန်းချီကားတစ်ချပ်တစ်ပုံဖြစ်ဖို့က အချိန်တွေ အတွေးတွေ ခံစားချက်တွေ ပေးခဲ့ရတာလေ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ရေးဆွဲတဲ့ပန်းချီကားတိုင်းကို ကိုယ်တန်ဖိုးထားကာ အခုလိုသေချာသပ်ယပ်လေးလုပ်ထား လိုက်တော့ ကိုယ့်ပန်းချီအနုပညာကို ကြည့်ပြီးပိတိဖြစ်သလို အခုလိုလာကြည့်တဲ့ နောင်ကြီးတို့လည်း သပ်သပ် ယပ်ယပ်လေးကြည့်ခွင့်ရလို့ ပန်းချီတွေအပေါ် အေးစေခံစားလို့ရတာပေါ့ဗျာ အဲဒီလိုခံစားရင်းက သဘောကျ မိသွားကြတော့လည်း ကိုယ့်ပန်းချီကားလေး ရောင်းရတာပေါ့လေ၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ပန်းချီအနုပညာကို ၀ါသနာ ပါလို့ ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုပုံဖော်တာမို့ ကိုယ့်ရေးဆွဲတဲ့ပန်းချီကားကို ခံစားမှုတိုက်ဆိုင်တဲ့သူက အဲဒီပန်းချီကို ၀ယ်ချင်ဝယ်မယ်ပေါ့ဗျာ မ၀ယ်ဘဲကြည့်ရုံဘဲကြည့်သူလည်းရှိချင်ရှိမှာပေါ့ဗျာ တစ်ယောက်မှအဲဒီပန်းချီကားကို ကြည်သူမရှိတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပန်းချီအနုပညာကို ဆွဲခွင့် ပြခွင့် ရနေတာကိုဘဲ ကျေနပ်နေမိပါတယ်လေ”
“နောင်ကြီးပြောတဲ့ စကားတွေထဲမှာ ကျုပ်အတွက်တော့ အနှစ်သာရလေးတွေရခဲ့လို့ ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ရှေ့ခရီးလေးဆက်ရအုံးမှာမို့ ခုနနောင်ကြီးဆွဲတဲ့ပန်းချီကား ဘယ်လောက်လဲဗျ ရန်ကုန်ကသူငယ်ချင်းကို အမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးချင်လို့”
ဆိုပြီး သူ့ထံမှ အဲဒီပန်းချီကားလေးဝယ်ကာ သူငယ်ချင်းကိုပေးရင်း ခရီးဆက်ဖို့အတွက် ဆွမ်းဦးပုံညရှင် စေတီကနေ ခရီးဆက်လို့ တောင်အောက်ကိုဆင်းရင် ပန်းချီဆရာ ပြောတဲ့ထဲက ကိုယ်တိုင်မှ တန်ဖိုး မထားတတ်ဘူး ပြန်မခံစားတတ်ဘူး ဆိုရင် ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ အခြားသူက တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ ခံစား တတ်ဖို့ဆိုတာ ပိုဝေးသွားမှာပေါ့ဗျာ ဆိုတဲ့စကားရပ်ကလေးကို အထပ်ထပ်ကြား နေမိသလိုပါဘဲလေ။
ကျွန်တော်တို့တွေလည်း ကိုယ်ရေးသီတဲ့ စာပေကို ကိုယ်တိုင်တန်းဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာ အဲဒီလို ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့အတွက်လည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကျိုးဖြစ်မဲ့ စာပေလေးတွေ အသိတရားရစေမဲ့ စာပေလေးတွေကို ရေးဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင် အဲဒီစာပေတွေကို ကိုယ်တိုင်လည်းတန်ဖိုးထားသလို စာဖတ်သူ ပရိတ်သပ်ကြီးလည်း တန်ဖိုးထားတတ်ကြမှာပေါ့လေ။
ပြီးတော့သူပြောခဲ့သလို ကိုယ့်ပန်းချီအနုပညာကို ၀ါသနာပါလို့ ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုပုံဖော်တာမို့ ကိုယ့်ရေးဆွဲတဲ့ ပန်းချီကားကို ခံစားမှုတိုက်ဆိုင်တဲ့သူက အဲဒီပန်းချီကို ၀ယ်ချင်ဝယ်မယ်ပေါ့ဗျာ မ၀ယ်ဘဲကြည့်ရုံဘဲကြည့်သူ လည်း ရှိချင်ရှိမှာပေါ့ဗျာ တစ်ယောက်မှအဲဒီပန်းချီကားကို ကြည့်သူမရှိတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပန်းချီအနုပညာကို ဆွဲခွင့် ပြခွင့် ရနေတာကိုဘဲ ကျေနပ်နေမိပါတယ်လေ ဆိုသလို ခင်ခ ရေးတဲ့စာပေကို ဖတ်တဲ့သူရှိချင်လည်းရှိမယ် မန့်တဲ့သူရှိချင်လည်းရှိမယ် မန့်တဲ့သူတစ်ယောက်မှ မရှိချင်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ် ပေမယ့် ခင်ခ စာရေးချင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန် ဒီဂဇက်ကြီးမှာ ရေးပြခွင့်ရနေတာကိုဘဲ ကျေနပ်နေမိပါတယ်လို့။
” ကျေးဇူးပါ ဂဇက်ကြီးရေ ”
ဒီလို ရေးစရာ ဖွဘုတ် နဲ့ ဂဇက် ၂ နေရာ ပဲ ရှိလို့ တော်သေးးး
၄ နေရာလောက် ဆို အနော့ လက် မလည်နိုင်ဝူးးး
သဘောတူကြောင်း ဝင်ပြောတာ ဗျို့
ကိုယ်တိုင် ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားကို ကြည့်သူ မရှိရှိ၊ ဝယ်သူ မရှိရှိ
အကောင်းဆုံး အနေနဲ့ ဖန်တီးထားတယ် ဆိုတာ အင်မတန် ကောင်းပါတယ်
အနုပညာ မြတ်နိုးသူ တန်ဖိုးထားသူ အများစု ရှိတဲ့ နေရာမှာ ချပြခွင့် ရတာဟာလည်း
ပန်းချီကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်သံ၊ အားပေးချီးကျူးသံတွေ ကြားလာခွင့် ရခဲ့ရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပေါ့ဗျာ။
ဆောရီးဗျာ.. အခုတော့ လိုက်ဖတ်နေပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဖတ်တဲ့ အချိန်ကျမှ .. စစ်ပွဲပို့စ်တွေချည်းပဲ.. စိတ်တောင် ညစ်လာတယ်.. ကိုပေါက် စကားနဲ့ဆို ဖန်တီးတဲ့သူက ဖန်တီးဖို့ပဲ အာရုံရတယ်ဗျ.. အဲတော့ သူများဟာတွေ အဖတ်အားနည်းတယ်.. အခုတော့ ခင်ခ ဟာ ဖတ်ခဲ့ပါတယ်..ဗျို့…
မှန်လိုက်လေကိုခင်ခရေ။ တကယ့်ကို အဓိပ္ပါယ်တွေရှိ့တဲ့ စကားလေးပါ၊ အနှစ်သာရအပြည့်နဲ့မို့ အကြီးကြီးလက်ခုပ်တီးသွားပါတယ်။ ဗရာဗိုပါ
လေးလေးခရယ် တကယ်ကို သဘောကျပါတယ်။ (ကိုယ်ရေးတဲ့စာပေကို ဖတ်တဲ့သူရှိချင်လည်းရှိမယ် မန့်တဲ့သူရှိချင်လည်းရှိမယ် မန့်တဲ့သူတစ်ယောက်မှ မရှိချင်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ် ပေမယ့် ခင်ခ စာရေးချင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန် ဒီဂဇက်ကြီးမှာ ရေးပြခွင့်ရနေတာကိုဘဲ ကျေနပ်နေမိပါတယ်)ဆိုတဲ့ စာသားကို သဘောအကျဆုံးပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ လည်း ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ။
မှာ Myanmar Gazette တင်နေတာ.. ပုံမတက်ပဲ..စာပဲတက်နေလေရဲ့..
ရေးတာလေးကို.ပုံမှန်ဝင်ဖတ်သူတွေ ရှိနေတဲ့ ဒီနေရာ…
ရှိနေတဲ့အတွက်.. တည်ဆောက်ထားသူတွေကို.ကျေးဇူးတင်နေတာ.. ။
ကျနော်ကတော့..လေးခရေးသမျှကို.. မလွတ်တမ်း ဖတ်နေတတ်သူ…
ကိုအလင်းဆက်က မလွတ်တမ်းဖတ်တဲ့သူဆိုတာ ကျွန်တော်သိပြီးသားပါ
ထပ်တူထပ်မျှသဘောတူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ကိုခ ရေ …
စာရေးစာဖတ် ဝါသနာပါသူတွေအတွက် တကယ့် လေ့ကျင့်ကွင်းပါဘဲ ။
ဒီမှာရှိနေကြတဲ့သူအားလုံးနဲ့ သဘောထားချင်း ထပ်တူကြတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါပဲ ..
ကြိုက်တယ်ဗျို့….အနှစ်အသားပါပါပြောသွားတဲ့ ပန်းချီဆရာကိုရော ထပ်ပြီးဖြန့်တွေးမိတဲ့ ကိုခ ကိုရော
ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ…ကျုပ်တို့တတွေ စာဆက်ရေးနေကြရအုံးမှာပါ..ဘယ်သူဖတ်ဖတ် မဖတ်ဖတ်ပေါ့
“ခင်ခ ရေးတဲ့စာပေကို ဖတ်တဲ့သူရှိချင်လည်းရှိမယ် မန့်တဲ့သူရှိချင်လည်းရှိမယ် မန့်တဲ့သူတစ်ယောက်မှ မရှိချင်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ် ပေမယ့် ခင်ခ စာရေးချင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန် ဒီဂဇက်ကြီးမှာ ရေးပြခွင့်ရနေတာကိုဘဲ ကျေနပ်နေမိပါတယ်လို့။”
မနေတတ် နေတတ်အောင်ဘဲ ကြိုးစားကျင့်ပါရစေ မနိုဗွီရေ အသေတော့ အခက်ပါရစေနဲ့ဗျာ။
သူကြီးအပါဝင် အဖွဲ့ သားအားလုံးကို ကျနော်ကကျေးဇူးတင်တယ်….
ကျနော်တင်နည်းက စာရေးရလို့ တင်တာမဟုတ်ဘူး….
သူတစ်ပါးရဲ့ ပိုစ့်ကို ဖတ်တဲ့ အခါ…Like လုပ်တဲ့ အခါ…မန့် (ကောမက်)ရေးတဲ့ အခါ…..gazette
ကကောမက်ရေးသူ အများစုက ပညာသားပါပါတယ်….တကယ်ကောမက်ကို ဖြစ်သလိုမရေးတတ်တာများတယ်…
တခါတလေ…ပိုစ့်ထက်ကောမက်တွေက အပြန်အလှန်ဖတ်လို့ ပိုကောင်းတယ်….
တပါးသူပိုစ့် ကို ဖတ်တဲ့ အခါသေချာဖတ်ပေးဖို့ ….ကျနော် အတုယူခဲ့ မိတာ…ဒီနေရာကပါ။
ကျနော်က ဖေ့ ဘုတ်မှာဘဲအနေများသူ…..။
ဂရုပေခ်ျ့ တွေ ဆိုဒ်တွေများနေလို့ သာမ၀င်နိုင်တာပါ။
အဲဒါ အမှန်ဆုံး စကားပါဘဲ။
ကိုခ စာတွေ က ဖတ်သူတွေ အတွက် အကျိုးရှိ ပါတယ် ကိုခရယ်။
မမန့်နိုင်လဲ ကြိုးစားပြီး ဝင်ဖတ်ပါတယ်။
ဟစ်တိုင် အတွက် ရွာ ဆောက်ပေးထားတဲ့ သူကြီးမင်း ကိုလဲ ကျေးဇူးကြီးပါ။
ဆဲဖို့ လိုရင်လဲ ဆဲပါရစေ။
နောက်လ..နောက်လတွေမှာ.. ရွာထဲက.. စာတွေကို..ပုံနှိပ်စာအဖြစ်..တိုးယူဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း.. လေးပါ..ထပ်ဖြည့်ပါရစေ..။
မြန်မာပြည်ထဲကသူတွေကို.. ပရိုတန်းခြေလှမ်းအဖြစ်ပြနိုင်အောင်.. စာမူခအဖြစ်(စတိ) ပေးသွားမယ်ဖြစ်ပြီး. မြန်မာပြည်ပြင်ပကသူများအတွက်လည်း.. စာမူခပေး/ပြန်ယူပြီး.. ဂဇက်ရံပုံငွေတရပ်အဖြစ် မတည်ထားသွားချင်ပါတယ်…လို့..
အပြင်ကနေ.. အဓိကရေးပေးနေတဲ့.. ဇီဇီ အပါအ၀င်.. ရွာ့လူကြီး..ကာလသားသမီးများ… အဲဒီကိစ္စ.. ဆွေးနွေးပေးကြစေလို..။
သများ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ဟင်???
ဘယ်လို ဂန်ဒတွေ မျိုးလိုချင်တုန်းးးး။
တဂျီး သတင်းစာကြည့်ရသလောက်တော့ အဲဒါတွေ အစုံပဲ။
ဒီထဲက ဘယ်အတွက် …. ဘယ်လောက် လိုချင်တယ် ဆိုတာ ပဲ ပြောလေ။
နား အဟွာပြုတန်တာပြု (နားပူနားစာ လုပ်တာ ပြောပါတယ်။)
သဂျီးဇုတ် .. ခီဗျား ကျုပ်ကို ဘယ်လောက် အကြွေးတင်နေဗီလဲ…
Points: 140253 Kyats မြက်လုံးဂျီး ဖြဲကြည့်စမ်း..
( စုစုစည်းစည်း ထိုအကြောင်းအရာကို မန့်လို့အဆင်ပြေအောင် အဲဒီလို ပြန်တင်ပေးထာပါတယ်ခင်ဗျ၊
လာရောက် မန့်သော ဇီဇီရဲ့ စာသားလေးတွေလည်း အဲဒီမှာ ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်)